Operation Vula - INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO, EZOKUVAKASHA NOKONGIWA KWEMVELO KWAZULU-NATAL UNKK NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKUVUSELELWA KWAMABHIZINISI AKWAMASHU, KWAMASHU G HALL, 07 SEPTEMBER 2019
INKULUMO KANGQONGQOSHE WEZOKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO, EZOKUVAKASHA NOKONGIWA KWEMVELO KWAZULU-NATAL UNKK NOMUSA DUBE-NCUBE EMCIMBINI WOKUVUSELELWA KWAMABHIZINISI AKWAMASHU, KWAMASHU G HALL, 07 SEPTEMBER 2019
EDTEA MEC NOMUSA DUBE-DUBE TO LEAD KWAMASHU BUSINESS REVITALISATION PROGRAMME
eNcotshane, eMlazi, eGamalakhe, eWembezi, eMpophomeni, eBruntville, eZakheni, eSibongile, eHambanathi, eMpumalanga, kwaDabeka, noma eNhlalakahle kunezindawo ezazenza amabhizinisi njengezitolo ezinkulu, njengalapha kwaNozaza, ezaziqalwe izinjinga zakithi kodwa zafadalala ngenxa mhlawumbe yodlame noma bawa ngasezimalini.
Ezinye zalezindawo noma izinxanxathela zezizinda zokuhweba ubunikazi bazo babukwinkampani yethu Ithala. Sithi-ke siyabuya sibuyisela umnotho ebantwini. Sifuna abantu bahwebele kulezindawo sizivuselele kusetshenzwe.
Kungaba izitolo, izindawo zokukhanda amafoni, izinjini noma ukufakelwa kwamathayi, ezokudayisa okuningi ngabe ukudla noma idata noma nje amahhovisi okusebenzela labo abadinga indawo yokuhweba.
Ukuzabalaza esiphezu kwakho namuhla umshikashika wokuthuthukisa izimpilo zabantu bakithi nokwenza ngcono inhlalo yabo.
Ngizimisele njengoNgqongqoshe omusha walomnyango ukwenza ukuthi osomabhizinisi abancane kanjalo nabakhulu baluthole uxhaso olufanelekile kwizikhungo zikaHulumeni ezibolekisa ngemali neziphinde zikhiphe izibonelelo zoxhasomali.
Kungakho ngikwazi ukubaluleka kokutshala imali elokishini ngoba ibhizinisi laselokishini londla imindeni eminingi.
Angikubalule nalokhu ukuthi kumele sikuqalise ukudayiswa kwezindlu ngoba ikona nokwenyusa izinga lamalokishi ethu. Lapha sikhuluma ngeProperty Business.
Uyakhula futhi uhleze ukhula umnotho waseLokishini
Ekhuluma neProperty360 ngenyanga kaMashi nonyaka ungoti wezomnotho webhange elikhulu uSiphamandla Mkhwanazi uthe: “Uthe lamakhaya ahola kangconywana noma kakhulu futhi akwazi ukuthatha ngesikweletu athenga izindlu lapha emalokishini aziguqule zibe izindawo zokuqasha,” uthi lokhu kuyakhula ngesivinini.
Uma sisala ekungeneni kulelibhizinisi lokudayisa izindlu sizozithola kwathina sihlezi phandle. Kumele siqale manje besacabanga abanye ukuthi kunobungozi lokhu okuthiwa iRisk thina ngoba siyazazi lezindawo singene sisebenze senze izinto zenzeke.
Ngenyanga kaJuly ngethule isabelomali salomnyango. Phakathi kokunye ngikhulume kakhulu ngokuxhaswa kwabantu bakithi. Ngikhuluma nje sizokwethula isikhwama soxhasomali seOperation Vula maduze nje esinenani okwamanje elikuR105 million. Engifuna ukukubona kakhulukazi izinkampani zabesifazane, imifelandawonye kanjalo nabantu abasha ikakhulu besifazane kuyibona abahlomulayo kulesikhwama.
Kodwa angethembise ukuthi wonke umuntu okulungele uzohlomula kulesikhwama. Ngiyajabula ukunibona niphume ngobuningi benu. Futhi njengoba sezichazile izikhulu zomnyango ukuthi sizifaka kanjani izicelo impela masisukume sibhukule sikwenze lokhu. Uma ungabhalisanga namuhla mhlawumbe uthole ukuthi ubungazipheke zonke izicucu, uzokwazi ukusizakala noma kunjalo.
Lesikhwama sizosiza abaningi. Siyazi emalokishini nasezindaweni zasemakhaya baningi abantu abazisebenzayo. Abantu bakithi bayalima, bayashisela, bakhanda izimoto baphinde bafuye izinkukhu. Bakwenza nje lokhu abanandawo yokusebenzela banethwa zimvula, abanayo imishini yokuqukula izinjini noma amakani kapende wokufutha imoto, izinkukhu zabo azikhanyiselwa ebusuku ukuthi zidle njalo nje zinonophale.
Lesibonelelo salesikhwama sizosiza kakhulu kukho konke lokhu uma nje efaka isicela sisicubungule bayobe sebewele ngelibanzi.
Okwanamuhla sizonicijisa futhi sizothatha yonke imininingwane yenu futhi siyazi abaningi benu bazoluthola uxhaso.
Ngikhuluma nje kulonyaka ophelile sixhase imifelandawonye yaKwaZulu-Natal engu 29 ngemali edlulile kuR30 million.
Enkulumeni yami yohlahlomali ngakhuluma futhi kakhulu ngoRaset. Lolu uhlelo loguquko olunqala kwezolimo oluhlose ukuvula amathuba ekukhiqizweni kokudla kusukela esivunweni sezolimo sabalimi ababencishwe amathuba kuye emabhizinisini enza imikhiqizo yezolimo.
Sithi-ke singuHulumeni imakethe sinayo njengoba sinezikole eziyizinkulungwane, izibhedlela nemitholampilo kanjalo namajele lapho abantu bakithi bezokwazi khona ukuyisa imikhiqizo yabo. Sizovula amathuba anjalo ukuze uma utshala noma ubhaka izinkwa uwubone lomsebenzi wakho lapho uphelela khona futhi ukwazi ukuhlomula.
Akekho esifuna asale ngaphandle. Ngiyazi besivamile ukukhuluma kanjena kusazoba wukhetho lukaZwelonke kepha manje lokhu esakuthembisa siyakwenza kwakukungekhona nje ukuthenga amehlo abantu bakithi. Siyaqhuba siya phambili futhi akekho esifuna asalele ngemuva njengoba sibuyisela umnotho kubantu.
Amabhizinisi amancane nasafufusa adlala indima enkulu emnothweni wezwe. Ngithi angikuveze nje ukuthi ucwaningo luthi emhlabeni wonke jikelele ngeke kube nentuthuko kwezomnotho osomabhinisi abancane bengekho ikakhulukazi imifelandawonye. Yibo izinjini zomnotho.
Siyadinga ukuthi kuvuleleke izindawo lapho abesifazane nentsha nabo bonke osomabhizinisi abancane bezokwazi khona ukuvula izindawo zokusebenza nokusebenzela ezindaweni zamakhosi.
Ifoni iphethe okuningi esingadala ngakho amathuba emisebenzi, singenza ama App noma sisebenzise amaApps akhona ukushintsha izimpilo zethu.
Ngayo belu inyanga kaJuly kuphume izibalo ezingezinhle ezithi izinga lokungaqashwa lenyuke lafika kumaphesenti angu 29. Ziyethusa lezibalo kanti futhi ziyakhombisa ukuthi itshe limi ngothi njengoba sekudiliza ngisho amabhange manje. Lokhu kwenziwa ukuthi imisebenzi ebiyenziwa ngabantu emabhange manje isiyenziwa imishini namaKhompiyutha.
Kungakho sithi kumele sakhe lokhu okuthiwa amaIndustrial Parks nakuzo izindawo zasemalokishini akithi. Silethe omahamba nendlwana lapho abantu abasha nabantu bakithi nabantu besifazane bezosebenzela khona. Bazodayisa idata, balungise amafoni benze okuningi kobuchwepheshe ukuze singene shi kulomkhakha. Lokhu ngizokumela nginguNgqongqoshe ukuthi ngenze iziqiniseko sokuthi abantu bakithi abasali nangengozi kulamathuba. Ngizoqinisekisa futhi ukuthi abesifazane bahamba phambili kulokhu.
Kuthiwa ukuwa kwenye indlu ukuvuka kwenye. Njengoba izinkampani ezinkulu zidiliza kunika osomabhizinisi abancane ithuba lokufufusa. Siyazi ukuthi nalaba abadilizwayo abaningi babo baphethe amakhono ayisimanga. Uma behlangana bengavula ezabo izinkampani kuphume amathuba emisebenzi.
Sengiphetha nje Mphathi wohlelo mangikusho ukuthi singuHulumeni onakelelayo sizimisele ukuvula amaningi amathuba emisebenzi ngokuthi sixhase osomabhizinisi abancane.
Nginifisela konke okuhle.
PHAMBILI NOKUVUSELELWA KWAMALOKISHI ETHU, PHAMBILI!